EM4450 Chip ကဒ်, EM4550 Chip ကဒ်
EM ကဒ် / LF Card ကို EM4450 Chip ကဒ်, EM4450 chip compatible with ISO11784 ISO11785, EM4550 chip card, EM4550 chip compatible with ISO11784 ISO11785
EM4450 chip / EM4550 chip, compatible with ISO11784 ISO11785 animal protocol, can be made to ID cards, access control cards/tags, animal ear tags,စသည်တို့ကို.
အလုပ်လုပ်အကြိမ်ရေ: 125kHz / 134.2KHz
1 EEPROM ၏ KBit အတွက်စည်းရုံး 32 စကား 32 -bits
32 နည်းနည်း Device ကို Serial Number (ကသာလေဆာ ROM ကို Read)
32 နည်းနည်း Device ကိုသတ်မှတ်ခြင်း (ကသာလေဆာ ROM ကို Read)
အလုပ်လုပ် mode ကို: R / W ကို
အကွာအဝေးကိုဖတ်ပါ: 1~ 10cm
အလုပ်လုပ်အပူချိန်: -40ကို C ~ + 85 ဒီဂရီစင်တီဂရိတ်ဒီဂရီ
သိုလှောင်ခြင်းအပူချိန်: -55ကို C ~ + 125 ဒီဂရီစင်တီဂရိတ်ဒီဂရီ
R / W ကိုဘဝ: 100,000 ကြိမ်
သိုလှောင်ခြင်း: 10 နှစ်ပေါင်း
ပစ္စည်း: PVC / ကို ABS / PET / PETG / PS / စက္ကူ, 0.13မီလီမီတာကြေးနီဝါယာကြိုး
အရွယ်: ISO ကို CR80 စံချိန်စံညွှန်းများ: 85.654 × 0.84mm သို့မဟုတ်ထုံးစံနှင့်အညီ×
encapsulation တွေကိုသေချာမှုလုပ်ငန်းစဉ်: အော်တို ultrasonic အော်တိုစက်ရုံလိုင်း / touch နဲ့ဂဟေ
လျှောက်လွှာများ: လက်မှတ်အရောင်း, Automotive Immobilizer with rolling code, High security free access control, အသုံးပြုခွင့်ကိုထိန်းချုပ်မယ်, Industrial automation with portable database, Manufacturing automation, Prepayment Devices, Prepaid electricity meter, water meter, gas meter, Animal husbandry management, ဝိသေသလက္ခဏာစစ်မှန်ကြောင်းအထောက်အထားပြသခြင်း, attendance system, ဟော်တယ်, employees' attendance, ယာဉ်ရပ်နားစီမံခန့်ခွဲမှု, social security management, and other general areas.
Provide white cards, printed cards, စက္ကူစတစ်ကာများ, key ကိုချည်နှောင်, TOKEN, andavariety of sizes and specifications and thin cards thick cards.
I am interested in your product EM4450 Chip Card, EM4550 Chip ကဒ်
prev: TK4100 Chip ကဒ်, TK4101 Chip ကဒ်, 125kHz သတ်မှတ်ခြင်း Card ကို
နောက်တစ်ခု: EM Chip စမတ် Access ကိုထိန်းချုပ်ရေး Card ကိုဖတ်အဝေးသင် 80mm, ID ကို & IC သတ်မှတ်ခြင်းကဒ် / Tag ကို